नेपालको पेट्रोल भारतमा तस्करी ! – Simple Khabar
काठमाडौं २२,चैत। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ह्वात्तै बढेको छ । लोडसेडिङ हटेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नुपर्नेमा झनै बढ्नुमा भारततर्फ हुने तेलको तस्करी मुख्य कारक रहेको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।
PREVIOUS POST Previous post: पुरुषहरूको कस्ता कुराप्रति आकर्षित हुन्छन् महिला ?
NEXT POST Next post: सलमान खानका फ्यान लाइ दुखद खबर: बलिउड सूपरस्टार सलमान खानलाई पाँच वर्षको जेल सजाय